I-Taliban ithatha ulawulo olupheleleyo lwe-Kabul's Hamid Karzai International Airport ngomso
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba eziQhekezayo zaseAfghanistan » I-Taliban ithatha ulawulo olupheleleyo lwe-Kabul's Hamid Karzai International Airport ngomso
Iindaba eziQhekezayo zaseAfghanistan • Airlines • isikhululo • uhambo ngomoya • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • ulwaphulo-mthetho • Iindaba zikaRhulumente • iindaba • Safety • Tourism • uthutho • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku • Iindaba ezahlukeneyo
I-Taliban iqhuba uthethathethwano neTurkey neQatar ngokubhekisele kulawulo lobuchwephesha bokusebenza kwisikhululo seenqwelomoya.
I-Taliban ithathe ulawulo lwesikhululo seenqwelomoya i-Kabul emva kokurhoxa e-US.
I-Taliban ifuna iTurkey neQatar incedise ekusebenzeni kwesikhululo seenqwelomoya iKabul.
Imikhosi yase-US irhoxe e-Afghanistan ngo-Agasti 31.
Ngokweengxelo zamva nje, i-Taliban izakuthatha ulawulo olupheleleyo lwe-Kabul's Hamid Karzai International Airport ngomso, emva kokurhoxa ngokupheleleyo kwemikhosi yase-US e-Afghanistan ngoLwesibini, nge-31 ka-Agasti.
Njengoko bekunjalo umbiko ngaphambili, iTaliban iqhuba uthethathethwano kunye I-Turkey ne Qatar ngokubhekisele kulawulo lobugcisa bokusebenza kwisikhululo seenqwelomoya. Amacala akakafiki kwisivumelwano okwangoku.
Kwangoko, iSithethi seOfisi yezoPolitiko yaseTaliban eQatar, u-Mohammad Suhail Shaheen, wathi umbutho oqinisekileyo wawunethemba lokurhoxa ngokupheleleyo kwemikhosi yamanye amazwe eKabul's Isikhululo senqwelomoya saseHamid Karzai.
Emva kokuba i-US ibhengeze ukuphela kweminyaka engama-20 yokusebenza kwayo e-Afghanistan kunye nokuqala kokurhoxa kwayo, i-Taliban yaqala ngokuchasene nemikhosi yaseburhulumenteni yase-Afghanistan. Nge-15 ka-Agasti, amajoni eTaliban angena eKabul ngaphandle kokudibana nayo nayiphi na inkcaso, ebeka ulawulo olupheleleyo kwikomkhulu lase-Afghanistan kwiiyure ezimbalwa.
Umongameli wase-Afghanistan u-Ashraf Ghani ulishiyile ilizwe, ngelixa u-Sekela Mongameli u-Amrullah Saleh wazibhengeza njengebambela-ntloko yelizwe kwaye wacela ukumelana ne-Taliban. Amazwe amaninzi enze ukukhutshwa okungxamisekileyo kwabemi kunye nabasebenzi bozakuzo abavela eAfghanistan emva kokuthathwa kweTaliban.